नेपालको संविधानले पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम जिल्ला र तराईका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया जिल्ला समेटेर प्रदेश नम्बर ५ को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी रुपन्देही जिल्लाको बुटवल तोकिए पनि अहिले प्रदेश नम्बर ५ को नाम के राख्ने, स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने ? भन्ने विषयमा प्रदेशको नेतृत्वले राजनीतिक संस्कार देखाएर उदार दृृष्टिकोण नराखेकोले प्रदेशको नाम र राजधानी समयमै टुंग्यो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसक्नु आफैमा लाजमर्दो हो । यसै विषयमा प्रदेन नम्बर ५ को प्रदेश सभा विशेष समितिले प्रदेशका जिल्लाहरुमा प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको लागि सुुझाव संकलन गरी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । अभिमत संकलन सहित गरिएको कार्यक्रममा उपस्थितिहरुलले विवादीत अभित दिने गरेका छन् । बुटवल अस्थायी राजधानी अपाई परेको भन्दै प्रदेशको राजधानी बाँकेको नेपालगन्ज तोकिनु पर्ने, यदि यसो हुन नसके बाँके र बर्दिया जिल्लाका स्थानीयवासीहरुले आफुहरु कर्णाली प्रदेशमा जान बाध्य हुने बताए । प्रदेशहरुको बाडफाड गर्दा बोके र बर्दियाका नागरिकमाथि अन्याय भएको बताउँदैं नेपालगन्ज भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न शहर भएकोले प्रदेशको राजधानी तोकिनु पर्ने माग जोड्तोडले उठेको छ ।
यो प्रदेशमा गौतम बुद्धको जन्मस्थलदेखि ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय क्षेत्रहरु धेरै रहेका छन् । महत्वपूर्ण सम्पदा रहेको प्रदेशमा आफ्नै साँस्कृतिक मौलिकता छ । एसियाकै ठूलो दाङ उपत्यका छ । प्रदेशमा खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र दलित लगाएत अन्य जातीको मिश्रित वसोवास छ । प्रदेश सरकार वास्तविकता नबुधिझ काँही कतैबाट प्रभावित भएर हचुवाको भरमा प्रदेशको नाम राख्न लागे प्रदेशका नागरिक आन्दोलन गर्ने छन् । सामाजिक सद्भाव र जातीय सम्प्रदायकलाई नखलबल्याई सहमतिमा प्रदेशको नाम राख्नु बुद्धिमानी हुने छ । प्रदेशको नाममा प्रदेशको विविधतालाई समेटेको हुनु पर्छ । प्रदेशको नाम ऐतिहसिक आधार, सामजिक साँस्कृतिक आधार र भौगोलिक आधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर नामाकराण गरिनु पर्छ । विभेद्पूर्ण तरिकाले प्रदेशको नाम राख्न खोजियो भने प्रदेशको वातावरण असहज हुन सक्छ । सवैलाई स्वीकार्य आफ्नै प्रदेशको विम्व झल्किने गरी प्रदेशको नाम राखिनु पर्छ ।
४ उप–महानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभागलाई समेटेको प्रदेशको सवैको साझा भुगोलमा राजधानी तोकिनु पर्छ । प्रदेशन नम्बर ५ ले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने, जनगणना २०६८ बमोजिम कूल जनसंख्याको ४५,४०,२२२ अर्थात १७.१४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको राजधानी तोक्दा प्रशस्त खुल्ला जमिन भएको ठाउँमा राजधानी तोक्नु पर्छ । जहाँ अन्य ठाउँ भन्दा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा अगाडी भएको हुनुपर्छ । प्रदेशका जनतालाई छिटोछरिटो आवश्यक सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने वेला ब्यपाक रुपमा छलफल हुनु पर्छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई पहिचान नै नगरी राजनीतिक सम्झौताका आधारमा राजधानी तोकिनु हुदैंन । प्रदेश नम्बर ५ स्थापना भएको वर्षदिन पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रदेशको विवाद जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले प्रदेशको नाम राख्न र प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न जति ढिला ग¥यो उतिकै विवाद झन बढ्दै जान्छ । प्रदेश सरकारलको सवैसँग आवश्यक छलफल, सल्ला सुझावलाई आत्मसाथ गरी प्रभावकारी समन्वयबाट छिट्टै प्रदेशको नाम राखि कुनै एक ठाउँमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नु पर्छ ।
More in this category: « सडकको आवाज सदनमा कहिले सुनिन्छ ?	अमेरिकामा एनआरएनको चुनावलाई लक्ष्य गर्दै छ्यापछ्याप्ती किर्ते फेसबुक आईडी(मुहार पुस्तिका हुलिया) »